Ikwesiri ibu 18 + Afọ Iri Iji Jiri Ọrụ Anyị
Ụbọchị bara uru: May 04, 2018
Sugarlove (“anyị”, “anyị”, ma ọ bụ “anyị”) na-arụ ọrụ webụsaịtị https://www.sugarlove.one (ọrụ ahụ).
Akwụkwọ a na-agwa gị gbasara iwu anyị banyere nchịkọta, iji, na ịkọwa data nkeonwe mgbe ị na-eji Ọrụ na nhọrọ ndị ị jikọtara na data ahụ.
Anyị na-eji data gị iji nye ma melite Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na nnakọta na ojiji nke ozi dị ka iwu a si dị. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, okwu ndị a na-eji na Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe dị na Usoro anyị na ọnọdụ anyị, enwetara site na https://www.sugarmamaslovefree.com
ServiceỌrụ bụ weebụsaịtị https://www.sugarlove.one bụ nke Sugarlove na-arụ
Data nkeonweData nkeonwe pụtara data banyere onye dị ndụ nke a pụrụ ịmata site na data ndị ahụ (ma ọ bụ site n'aka ndị na ozi ndị ọzọ ma ọ bụ na anyị nwere ma ọ bụ na-abata na anyị).
Njikwa ejijiUgboro ojiji data achotara na akpaghi aka ma o bu site na ojiji nke oru ma o bu site na onwe oru onwe (dika ima, oge nke nleta ibe).
CookiesKuki bụ obere data echekwara na ngwaọrụ gị (kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka).
Adreesị, State, Province, ZIP / Postal code, City
Kuki Mgbasa Ozi. A na-eji Cookies Mgbasa ozi iji jee ozi gị na mgbasa ozi nke nwere ike ịba uru na gị na ọdịmma gị.
Sugarlove na-eji data anakọtara maka ebumnuche dị iche iche:
Iji nye ma debe Ozi anyị
Iji nye nkwado ndị ahịa
Iji kpokọta nyocha ma ọ bụ ozi bara uru ka anyị nwee ike melite Service anyị
Iji nyochaa ojiji nke Ọrụ anyị
Ọ bụrụ na ị nọ n'èzí Denmark ma họrọ inye anyị ozi, biko mara na anyị na-ebufe data, gụnyere Personal Data, na Denmark ma dezie ya n'ebe ahụ.
Sugarlove ga-agbaso nzọụkwụ niile n'ụzọ ezi uche dị na ya iji hụ na ejiri data gị data echedoro yana ọfụma na Iwu Nzuzo a ọ nweghị mbufe data Nkeonwe gị ga-aga na nzukọ ma ọ bụ obodo ọ gwụla ma enwere njikwa zuru oke ebe gụnyere nchedo nke data na ozi ndi ozo.
Sugarlove nwere ike igosipụta data nkeonwe gị na ezigbo okwukwe siri ike na ụdị ihe a dị mkpa iji:
Iji kpuchido ma chebe ikike ma ọ bụ akụ nke Sugarlove
Anyị nwere ike iji ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ na-egosi gị mgbasa ozi iji nyere aka na akwado ọrụ anyị.
Google AdSense & Cookie DoubleClickGoogle, dị ka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji na-enye mgbasa ozi na Ọrụ anyị. Ojiji nke DoubleClick kuki na-enyere ya na ndị mmekọ ya aka ịnye mgbasa ozi nye ndị ọrụ anyị dabere na nleta ha na Ọrụ anyị ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ na .ntanetị. You nwere ike ịpụ na ojiji nke DoubleClick kuki maka mgbasa ozi dabere na mmasị site na ịga na Web peeji nke Google Mgbasa ozi Mgbasa ozi: http://www.google.com/ads/preferences/
Sugarlove na-eji ọrụ ịre ahịa na-ekwusara gị na ebe nrụọrụ weebụ nke atọ mgbe ịlechara Ọrụ anyị. Anyị na ndị ọzọ na-ere ahịa na-eji kuki iji kọwaa, bulie ma jee ozi mgbasa ozi dabere na nlele gara aga nke Ọrụ anyị.
Google AdWordsGoogle AdWords na-ahụ maka nrụpụtagharị ọrụ nke Google Inc. http://www.google.com/settings/adsGoogle kwukwara ka ịwụnye mgbakwunye Nchọpụta Ihe Nchọpụta Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - maka ihe nchọgharị weebụ gị. Ihe Nchọpụta Ntanetị Ihe Nchọpụta Google Analytics na-enye ndị ọbịa ike igbochi data ha site na ịnakọta ma jiri Google Analytics mee ihe. Maka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo nke Google, biko gaa na websaịtị Nzuzo & Usoro Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Anyị nwere ike inye ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ọrụ na Service. N'okwu ahụ, anyị na-eji ọrụ ndị ọzọ maka nkwụnye ego (dịka ndị nhazi ego).
Anyị agaghị echekwa ma ọ bụ nakọta nkọwa nkọwa nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị. A na-enye ozi ahụ kpọmkwem na ndị nhazi ndị ọzọ nke ịkwụ ụgwọ nke ndị ọzọ bụ ndị jiri ozi gbasara gị na-achịkwa ha Nzuzo Nzuzo. Ndị ọrụ nkwụnye ụgwọ a na-agbaso ụkpụrụ nke PCI-DSS na-achịkwa dịka nke PCI Security Standards Council na-achịkwa, nke bụ ihe jikọrọ aka nke ụdị dị ka Visa, Mastercard, American Express na Discover. Ngwa PCI-DSS chọrọ nyere aka hụ na ejikwa ihe nkwụnye ụgwọ.
Usoro nkwụnye ego anyị na-arụkọ ọrụ bụ:
Akwụnye Ụlọ ahịa Apple-Store na-akwụ ụgwọHa nwere ike ilele Nzuzo ha https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Ntanye Google Na-akwụ ụgwọ ntinyeHa nwere ike ilele Nzuzo ha https://www.google.com/policies/privacy/
PayPal ma ọ bụ BraintreeHa nwere ike ilele Nzuzo ha https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
Site na email: admin@sugarlove.one